2 Beresosɛm 9 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Beresosɛm 9:1-31
9 Na Saba+ hemmaa tee Solomon ho asɛm, na ɔbaa Yerusalem sɛ ɔde aborɔme rebɛsɔ no ahwɛ.+ Ɔreba no, ɔde dɔm kɛse pa ne yoma+ a wɔsosõ balsam ngo+ ne sika+ pii pa ne aboɔden abo+ bae. Ɔde nkakrankakra beduu Solomon nkyɛn, na ɔkaa biribiara a ɛda ne koma so kyerɛɛ ɔhene.+ 2 Ɛnna Solomon nso buaa no ne nsɛm no nyinaa,+ na biribiara nni hɔ a ɛkyeree Solomon so a wantumi ankyerɛ no.+ 3 Bere a Saba hemmaa huu Solomon nyansa,+ ne ofie a wasi,+ 4 ne ne pon so nnuan,+ ne ne nkoa atenae, ne n’asomfo a wɔsom wɔ pon ho ne wɔn ntade,+ nsahyɛfo+ ne wɔn ntade, ne ɔhyew afɔre+ a ɔbɔ daa wɔ Yehowa fie+ no, asɛm no mee ɔhemmaa no. 5 Enti ɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Wo nyansa ne wo ho nsɛm a metee wɔ m’asase so nyinaa yɛ nokware.+ 6 Mannye wɔn nsɛm no anni+ kosii sɛ m’ankasa mede m’aniwa behui;+ nea wɔka kyerɛɛ me no, nokwasɛm ni, ennu wo nyansa fã mpo!+ Nea mabehu yi boro nea metee no koraa.+ 7 Anigye+ ne wo nkurɔfo, na anigye ne wo nkoa yi a wogyina w’anim daa tie wo nyansa no.+ 8 Nhyira+ nka Yehowa wo Nyankopɔn; ɔno na ayɛ no fɛ+ sɛ ɔde wo bɛtena n’agua so+ ayɛ wo ɔhene ama Yehowa wo Nyankopɔn;+ wo Nyankopɔn dɔ+ Israel, na ɔpɛ sɛ ɔman no gyina daa nti na ɔde wo asi wɔn so hene+ sɛ bu atɛn+ na di asɛntrenee.”+ 9 Ɛnna ɔmaa ɔhene sika+ dwetikɛse ɔha aduonu, ne balsam ngo+ pii pa, ne aboɔden abo.+ Balsam ngo a Saba hemmaa de maa Ɔhene Solomon no dodow nni ano.+ 10 Ɛno da nkyɛn a, Hiram nkoa+ ne Solomon nkoa a na wɔde sika+ fi Ofir brɛ no no, na wɔde algum nnua+ ne aboɔden abo+ nso ba. 11 Na ɔhene de algum nnua yɛɛ antweri+ wɔ Yehowa fie ne ahemfie,+ na ɔde bi nso yɛɛ asanku+ ne asankuten+ maa nnwontofo+ no; ná wonhuu ɛso bi da wɔ Yuda asase so. 12 Ɔhene Solomon nso de nea Saba hemmaa+ bisae nyinaa maa no, na ɔhene de akyɛde a ne dodow te sɛ nea ɔde bae no kaa ho maa no. Enti ɔsan n’akyi kɔɔ n’asase so, ɔne ne nkoa.+ 13 Sika a na Solomon nya wɔ afe biako mu no mu duru yɛ sika dwetikɛse ahansia aduosia asia;+ 14 ɛsono nneɛma a na akwantufo ne aguadifo+ no de ba, ne sika ne dwetɛ a Arabiafo ahene+ nyinaa ne asase no so amradofo de brɛ Solomon. 15 Na Ɔhene Solomon de sika mfrafrae yɛɛ akyɛm+ akɛse ahanu (ɔde sika mfrafrae nnwetɛbona ahansia guu akyɛm no biara ho),+ 16 na ɔde sika mfrafrae yɛɛ nkatabo ahasa (ɔde sika mmɛnnaa abiɛsa guu nkatabo no biara ho).+ Na ɔhene de guu Lebanon Kwaefie+ hɔ. 17 Afei nso ɔhene yɛɛ asommɛn ahengua kɛse bi, na ɔde sika amapa guu ho.+ 18 Atrapoe a ɛwɔ so asia na wɔforo de kɔ ahengua no anim; nan ntiaso a wɔde sika ayɛ wɔ ahengua no anim (wɔayɛ abom), na faako a wɔtena no, nsa wɔ ha ne ha, na agyata+ abien gyinagyina nsa no ho.+ 19 Agyata+ dumien gyinagyina atrapoe a ɛwɔ so asia no so; biako wɔ ha, na biako nso wɔ ha. Wɔnyɛɛ bi saa da ahenni biara mu.+ 20 Ade a Ɔhene Solomon nom mu+ nyinaa, wɔde sika na ɛyɛe,+ na Lebanon Kwaefie+ hɔ anwenne nyinaa, wɔde sika amapa na ɛyɛe. Wɔamfa dwetɛ anyɛ emu biara, efisɛ Solomon nna mu no, na wɔmfa nyɛ hwee.+ 21 Ná ɔhene wɔ ahyɛn a Hiram nkoa+ de kɔ Tarsis.+ Mfe abiɛsa biara, na Tarsis ahyɛn de sika ne dwetɛ+ ne asommɛn+ ne nkontromfi ne koohaa+ ba. 22 Enti Ɔhene Solomon yɛɛ kɛse sen asase so ahene a aka nyinaa, ahonya+ ne nyansa+ mu. 23 Asase so ahene nyinaa baa Solomon anim betiee+ nyansa+ a nokware Nyankopɔn de ahyɛ ne komam+ no. 24 Obiara de n’akyɛde bae+ afe biara:+ dwetɛ ne sika nneɛma+ ne ntade,+ akode, balsam ngo, apɔnkɔ ne mfurumpɔnkɔ. 25 Na Solomon nyaa apɔnkɔdan+ mpemnan ne nteaseɛnam+ ne apɔnkɔ a wɔde wɔn kɔ ɔsa mpem dumien, na ɔde ne nyinaa kɔɔ nteaseɛnam nkurow+ mu ne ɔhene nkyɛn wɔ Yerusalem. 26 Odii ahene nyinaa so, efi asubɔnten kɛse no ho kosi Filistifo asase so ne Egypt hye so.+ 27 Bio nso ɔhene maa dwetɛ dɔɔso pii wɔ Yerusalem sɛ abo, na ɔmaa nkyeneduru dɔɔso pii+ sɛ sikamɔɔ nnua+ a ɛwɔ Sefela.+ 28 Ebinom nso de apɔnkɔ+ fi Egypt+ ne nsase a aka no nyinaa so brɛɛ Solomon. 29 Solomon ho nsɛm a aka,+ ne mfiase kosi n’awiei, wɔakyerɛw ne nyinaa wɔ odiyifo Natan+ ne Siloni+ Ahiya+ nkɔmhyɛ nsɛm mu. Ɛwɔ ɔdehufo Ido+ anisoadehu ho kyerɛwtohɔ nso mu, anisoadehu a ɛfa Nebat+ ba Yeroboam+ ho no. 30 Solomon dii Israel nyinaa so hene wɔ Yerusalem mfe aduanan. 31 Na Solomon ne n’agyanom kɔdae, na wosiee no ne papa Dawid Kurow+ mu, na ne ba Rehoboam+ bedii n’ade.+
2 Beresosɛm 9